Isongo sinomhlobiso ofanele isihenqo. Izesekeli ezifanayo zingagqunywa abesifazane nabesilisa. Izinketho ezinomzimba ezincane zigcizelela ukuthambekela kwesandla sesifazane, futhi izibopho ezinkulu zihlobisa isandla salowo muntu. Noma yiliphi ilungu lezocansi ezinamandla, isongo elibizayo liyisibonakaliso sesimo sakhe. Ngokuvamile, amadoda agqoka izesekeli ezifanayo njengengxenye yokufaka isambatho sebhizinisi. Isongo sesifazane ngowokuqala futhi okubaluleke kakhulu umhlobiso, ngakho-ke izinhlobo zokugqoka kwazo zihlale zihlukaniswa ngokucwengiswa nokulungiswa. Ngaphezu kwamasongo akhiwe ngamatshe ayigugu, abesifazane bahlobisa kalula izigqoko zabo ngezingubo ezihlukile zangempela. Amasongo omuhle manje angenziwa ngezinto ezihlukahlukene - ingilazi, iplastiki, intambo, insimbi, isikhumba. Kulezizinto zokwakha ungenza izesekeli kuzo zonke ukunambitheka, noma yisiphi isembatho, noma yisiphi isenzakalo, kunoma yisiphi isitayela.
Kodwa kungamanga ukukholelwa ukuthi imikhiqizo eyenziwe ngamatshe ayigugu ayifani kakhulu futhi inhlobo efanayo. Ama-jewelers alungele ukunikeza izinketho zokugqoka ngezitayela ezahlukene. Isongo elihlotshiswe ngamatshe ayigugu lizohambisana nesithombe sakusihlwa. Izindandatho ezine-cubic zirconia ezishisa ilanga zizoba usizo kumcimbi. Ngokuyinhloko, isitayela sesongo sithinteka uhlobo lomkhiqizo walo. Izinhlobo zokufaka izintambo ziyamangala ngokuhluka kwazo. Amasongo wesandla aphezulu, kodwa abulawa ngokucophelela, evame ukubiza. Izinhlobo zamaketanga anjalo zikhulu - kusukela e-classical kuya kumnandi. Izinhlobo ezinjengezintambo zokudlala zidlalwa ngokudlala, ngobuhle, ngokuqinile. Imishini yamaketanga eboshwe engasindi, engajulile, kodwa enhle kakhulu. Izinhlobonhlobo zamaketanga namasongo zihlukile ekutholakaleni kwazo ohlelweni lwamanani.
Ukuze uthole ukuhamba okungahlelekile, isibonelo, ukugibela ogwini noma ku-cafe nabangani, abaningi bakhetha ukugqoka ubucwebe. Ubucwebe buheha ukufinyelela. Imihlobiso enjalo ingenziwa kalula ngezandla zomuntu kusuka ezintweni ezifakiwe. Isiqondiso esithandwa kakhulu ukusika ama-baubles. Izesekeli ezinjalo eziboshwe zingahlobisa hhayi nje isihlakala, kodwa futhi nesigqoko. I-Fenichkoy yabiza ngamasongo enziwe ngezandla ezenziwe ubuhlalu, izintambo, izibambo, isikhumba, intambo. Abamele isitayela se "hippies" bathanda kakhulu ukugqoka imihlobiso enjalo. Ama-blubudi ahlukene ngamandla, izinyawo, ubuhlalu obubunjiwe - izici ezihlukile zalesi sitayela. Ethandwa kakhulu nabalandeli besitayela se "hippies" namasongo avela emicongweni. Ngokuvamile zikhazimulayo, zibambe, zimibalabala. Amasongo amaningana wezinto ezihlukene namaphethini asesandleni.
Izinhlobo zokugaya nazo zihlukile. Yiqiniso, lokhu kusebenza njalo. Ngokuvamile ukusika amabheki kwaqala ngesikhathi sokuba khona kwezizwe zaseNdiya. Ukushintshaniswa kwama-baubles kwakungumkhuba wonke wamaNdiya. Banikezwa omunye nomunye njengesibonakaliso sobuhlobo nenhlonipho. AmaNdiya awazange athengise ama-baubles, awanika kuphela. Ukushintshaniswa kwakusho ukuthandana. Manje akudingekile ukuba ube umlingani wezinhlobo ze "hippies" zokugqoka amasongo anjalo. Zivame ukugqoka njengemihlobiso. Ngokuvamile ukufaka ama-baubles sebenzisa izintambo floss. Ukuthatha ama-skeins amabili noma amathathu ungafunda izinhlobo ezilula zokugqoka, isibonelo, ngesimo se- braid, i-spikelet. Uma kunesifiso sokuthola izinhlobo eziyinkimbinkimbi zokugaya, khona-ke ekufundeni kunezinhlelo ezahlukene. Ukuziqondisa kuzo ungakwazi ukugqoka ama-resub, ama-baubles anephethini, amabhanela afanekisiwe.
I-Fenichka ingaba isipho esimnandi kumuntu othandekayo. Kuyo ungakwazi ukukhipha igama lakhe, khona-ke isongo sizobizwa futhi. Ukunikeza amasongo njengesibonakaliso sobuhlobo nothando kuyisiko esihle kakhulu, okufanele siboleke kumaNdiya. Isongo esisha, sangempela esenziwe ngezandla zakho, ngaphezu kwalokho, sinikezwe ngomphefumulo, sizoba isipho esiyifunayo kakhulu.
Ngingawasebenzisa kanjani amadiski endala ngaphakathi?
Ukumangala okumnandi kubantwana: imidwebo eyenziwe ngephepha elinemibala ngezandla zabo
Ukudweba (indwangu): incazelo nokubunjwa
Umhluzi ovela ebhodleleni leplastiki: i-master class
Imihlobiso eyenziwe ngobumba be-polymer
"Riga-11" (Moped) Ukucaciswa nezici
"Tsefamadar" amaphilisi neminye: ukubuyekezwa odokotela, imiphumela kanye nokusebenza
Wamafutha "Oflomelid": kobufakazi nesineke, yokusetshenziswa, futhi intengo analogue izidakamizwa
Ducks Black: izici nezithombe
Polystyrene amabhlogo: ukubuyekezwa noma nakha izindlu
"INeva" (Perm) - Indawo yokudlela: izithombe, izibuyekezo, imenyu